प्रेमिका खोज्दै हरेक वर्ष १४ हजार किलोमिटर उड्छ यो चरा
प्रेम मानव समुदायमा मात्रै सिमित छैन । यो पशुपंक्षीहरुमा पनि ब्याप्त छ । नत्र एउटा भाले सारस पोथी सारसलाई भेट्न किन वर्षेनी हजारौं माइलको यात्रा गर्थ्यो । क्रोयशियाको एक जोडी सारस क्लेपेटन र मालेनामा पशुपंक्षीबीच प्रेम र त्यागको अनुपम उदाहरण हुन् । दक्षिण अफ्रिकाबाट क्लेपेटनान मार्चको अन्तिममा क्रोयशियामा रहेको ब्रोड्स्की भारोस गाउँमा छिर्‍यो । उ यो गाउँमा पसेको लगातार १६ औं वर्ष हो । यहाँ उसले फेरि आफ्नो जीवनको प्रेमलाई भेट्यो, एउटा सेतो सारस मलेना । यो जोडीले अहिलेसम्म ६२ वटा चल्ला जन्माइसकेको छ, र मलेना थप ...
अर्बौँ सम्पत्तिका मालिक किन चढ्छन सस्तो गाडी ? यस्ता छन् विश्वकै धनी बेजोसदेखि जुकरबर्गसम्मले चढ्ने कार !
एजेन्सी - विश्वका धनाढ्यको सूचीमा रहेका यी बिजनेस टाइकूनसँग अर्बौँ डलर सम्पत्ति छ । तर, यिनीहरुले चढ्ने गाडीबारे जानकारी पाउँदा पक्कै सबैलाई छक्क लाग्ला । उनीहरु सस्तो कार चढ्न रुचाउँछन् । कतिपय ३५वर्ष मुनीकै छन्, जस्तै : फेसबुकका सिइओ मार्क जुकरबर्ग । फेसबुकका मालिक मार्क जुकरबर्गदेखि गुगलका फाउन्डर लारी पेजसम्मले दुनियाँले सोचेभन्दा सस्तो गाडी चढ्छन् : जेफ बेजोसअमेजनका मालिक तथा सिइओ हुन् जेफ बेजोस । उनले बर्षौंदेखि विश्वकै धनीको सूचीमा रहेका बिल गेट्सलाई केही समययता पछाडि पारिदिएका छन् । अर्थात् बेजोस विश्वकै धनी व्यक्ति हुन् ...
सुनचाँदीलाई त मानिसले लकर वा सेफमा राख्छन् जतन गरेर । तर यो दुनियामा एउटा यस्तो देश पनि छ ढल तथा नालीमा सुन बग्दछ । दुनियाको सबैभन्दा सम्पन्न देशहरु मध्येको एक स्विजरल्याण्डमा हरेक वर्ष करोडौँ रुपैयाँ मूल्य पर्ने सुन ढलमै बगाइन्छ ।हालैको एक रिपोर्टले यो कुराको खुलासा गरेको छ । शोधकर्ताहरुले जब ढलमा रहेका ठोस फोहोर निकालेर ती फोहोर छुट्टाएर अध्ययन गरे । तब त्यस्तो फोहोरमा सुनचाँदीका अत्यधिक टुक्राहरु भएको पाइयो । विभिन्न ठाउँको ढलको ठोस फोहोर प्रशोधन गर्दा ३ हजार किलो चाँदी तथा ...
जिउँदो ढुंगा, जो रुखझैँ बढिरहेको छ
रोमानियामा एउटा यस्तो गाउँ छ जहाँ, जिउँदो ढुंगाहरु पाइन्छ । यो कुरामा विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ । वास्तवमा यो ढुंगाले आफ्नो आकार बदलिरहन्छ । विश्वका कैयन् भुगर्भशास्त्रीहरुले यी ज्यूँदा ढुंगाहरुको अध्ययन गरिरहेका छन् । अहिलेपनि यी ढुंगाहरुको आकार बढिरहेको छ, जुन रहस्यमय बनिरहेको छ ।स्थानीय बासिन्दाहरुका अनुसार पानीसँगको सम्पर्कमा आउने बित्तिकै यी ढुंगाहरुको आकारमा बदलाव आउँदछ ।वैज्ञानिकहरुका अनुसार ढुंगामा रहेको लवणको अत्यधिक मात्राका कारण ढुंगामा पानी पर्ने बित्तिकै ढुंगा फुल्न जाने र यसको आकार बढ्ने भएको हुनसक्छ । तर ती गाउँका ...
सामान्य मानिसले चुरोट पिउँदा बाँकी रहेको चुरोटको ठूटो फ्याँक्यो भने त्यसको मूल्य कति होला ? त्यस्तो चुरोटको ठुटोको कुनै मुल्य पर्नु त परै जाओस् जथाभावी चुरोटका ठूटा फाल्दा कतिपय देशमा त कारवाही समेत हुन्छ ।सामान्य मान्छेले चुरोटका ठूटा फ्याक्दा कारवाही भोग्नुपर्ने यो दुनियामा ठुलाबडाले फ्याँकेका चुरोटका ठूटा चाहीँ लाखौँ रुपैयाँमा बिक्दा रहेछन् ।बेलायतका पूर्व प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिलले फ्याँकेको चुरोटको ठुटो हालै १२ लाख रुपैयाँभन्दा धेरै मूल्यमा बिकेको छ ।अमेरिकाको बोस्टनमा रहेको आरआर लिलाम घरमा उक्त चुरोटको ठुटो १२ हजार ...